‘केपी शर्मा ओली सच्चिने कि सकिने? – Karnalisandesh
‘केपी शर्मा ओली सच्चिने कि सकिने?
प्रकाशित मितिः १३ माघ २०७७, मंगलवार ११:५० January 26, 2021
काठमाडौँ। सोमबार बालुवाटारमा नागरिक समाजद्वारा आयोजित शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमाथि केपी ओली सरकारका प्रहरीहरुले क्रूर दमन गरे।
उक्त घटनालाई दिएर सरकारको चौतर्फि विरोध भइरहेको छ। नागरिक अगुवामाथिको दमनलाई चरम फासीवादी व्यवहार भन्न सकिन्छ। लोकतान्त्रिक मुलुकको कम्युनिस्ट सरकारले निरङ्कुश चरित्रको प्रदर्शन गरिरहेको छ। यसरी हेर्दा व्यवस्था परिवर्तन भएपनि अवस्था उस्तै छ। जननिर्वाचित तानाशाहको उदय भएको यस अवस्थमा सबै मानिसहरु ओलीको विरुद्ध आन्दोलित छन्।
शान्तिपूर्ण भेला हुने, जुलुस वा विरोध प्रदर्शन गर्ने नागरिकको हक अधिकार विद्यमान संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ। र, त्यो हक अधिकार हामीले कसैको दयामाया वा निगाहाले पाएका पटक्कै होइनौं। राणाकालीन समयदेखि यताका विभिन्न क्रान्ति, संघर्ष र आन्दोलनहरुको कूल योगका प्रतिफल स्वरूप स्थापित भएका नैसर्गिक जनअधिकार हुन्। जसका लागि नेपाल आमाका हजारौं हजार सर्वोत्तम छोराछोरीले संघर्ष गरेका थिए। शहिद बनेका थिए।
हिजो राजनीतिक दलहरुको आन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुश दमनतन्त्रका विरुद्ध प्रतिरोधी आन्दोलनले गति लिन नसकिरहेको अवस्थामा जनप्रदर्शनको ज्वारभाटा उठाएर राजनीतिक दलहरुको धिपधिपे प्रतिरोध आन्दोलनमा इन्धन भर्ने काम नागरिक समाजले नै गरेको थियो। त्यो इतिहासको पानामा स्वर्ण अक्षरमा अंकित भैसकेको छ।
तर दुर्भाग्यवश, हिजो त्यही नागरिक समाजको अगुवाइमा लोकतन्त्रको रक्षार्थ आयोजित शान्तिपूर्ण खबरदारी विरोध प्रदर्शनमाथि ओली प्रशासनले क्रूर दमन गर्‍यो। उनीहरुमा हिजोका दमनकारी शासकहरुको काँचो प्रेतवायुले प्रवेश पाएको प्रतीत भएको छ। हिजो ज्ञानेन्द्र नाराहिटी छोडेर नागार्जुनमा गए। आज ओलीले वालुवाटार छोडेर बाल्कोट जान सक्दैनन्? सत्ताको लागि यतिसम्म मरिहत्ते? किन र के कालि? यो सब व्यवस्था सक्ने खेलमा छन्?
ओलीले निषेधित क्षेत्रका नाममा जनताका आवाजलाई थुनछेक गर्ने काम गरिरहेका छन्। जनताहरु हातमा दही जमाएर र कानमा रुवा कोचेर बस्नेवाला छैनन्। यो कुरा ओली र ओलीलाई महाराजा बनाउनेहरुले राम्रोसँग ख्याल गनुर््पर्छ। नेपालका राजनीतिक दलहरुबाट भएको दुःखद तथ्यलाई जनताहरुले राम्रोसँग स्मरण गरेका छन्। जनताको मतबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओली जनताको नाममा निवार्चन नामको अस्त्र प्रयोग गरेर राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक भार थोपर्ने दाउमा किन हिडिरहेका छन्? शासनको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएपछि ओलीले आफूलाई जनताको सेवक हैन, शासक ठान्ने मैमत्तापन किन देखाइरहेका छन् ?
लोकतन्त्र–गणतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर चरित्र भनेकै विरोधी विचार र आवाजहरुको सम्मान र सम्बोधन हो। आफू विरुद्धका आवाजलाई सुन्नै नसक्ने वा नचाहने प्रवृत्ति निरंकुश र फासीवादी चरित्र हो। आफूलाई जनताप्रति उत्तरदायी ठान्ने शासकहरुले जहिल्यै पनि जनताका शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमाथि निर्लज्ज दमन गर्छ? जनतामाथि दमन गरेको सुहाउछ?
नेपालका कम्युनिष्टहरुले प्रतिक्रियावादी भन्दै आएको मुलुक अमेरिकामासमेत शासकहरुका विरुद्ध शान्तिपूर्ण रुपमा ह्वाइटहाउस अगाडि जम्मा भएर मज्जाले नाराजुलुस विरोध प्रदर्शन गर्छन। तर, यहाँ ? कोसौ टाढा रहेर विरोध गरिरहेका नागरिकहरुमाथि यसरी दमन गर्न मिल्छ? वालुवाटारमा नागरिक समाजको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमाथि भएको बर्बर दमन अत्यन्तै निन्दनीय र भत्सर्ना योग्य छ। वर्तमान ओली सरकारले अख्तियार गरेको फासीवादी चरित्रको अन्त्य निकट समयमै छ। तसर्थ ओली सच्चिनु पर्छ या त सकिनुपर्छ। यसको विकल्प अरु छैन।
विप्लव समूहले पनि गठन गर्यो वार्ता समिति
विप्लव समूह पनि वार्ताका लागि समिति बनाउने तयारीमा
विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा, वार्ताका लागि बादल नेतृत्वको टोली गठन